Error Repair Professional - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
24-01-2008, 05:35 AM
အခုတလော စက်ကလေး၊အယ်ရာကခဏခဏတက်တာနဲ့ဟိုရှာဒီရှာနဲ့ ဒါလေးတွေ့လာလို့။ ဟုတ်သော်ရှိမဟုတ်သော်ရှိ နည်းနည်းတော့ပေါ့သွားသလိုပဲ။ စမ်းသုံးကြည့်နော်.. အဆင်ပြေရင် ကျနော်ပေးတာလို့ပြော။ မပြေရင်ဘယ်ကရမှန်း မသိဘူးလို့ပြောနော် .... ဟီး ဟီး။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ရဲဒင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပြန်စာ - error repair professional
ညီစမ်းလိုက်ပြီအစ်ကိုရေ.......အဆင်ပြေလားတော့မသိဘူး....ညီ့ရဲ့ Cpu ပုံးကိုမကြည့်တာနဲနဲပေါ့သွားသလိုပဲ..... စတာပါ...အဆင်ပြေပါတာယ်အကို.......................
24-01-2008, 10:44 AM
အကိုပြောသလို့စမ်းကြည့်ဖို့ ယူသွားပြီးနော်..
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ.... အခု လို လေး မျှဝေပေးတဲ့ အတွက်..
Error Repair Pro_v3.7.8
Eliminate Them Instantly and Have The Peace Of Mind Knowing Your PC is Automatically Kept Error Free, 24 Hours A Day!"
Last edited by PyaitSone; 25-09-2008 at 09:23 PM.. Reason: Link အသစ်ပြင်ရန်။
ီလေးလဲ ယူသွားတယ်ဗျာ.....အကိုတစ်ခု လောက်တောင်းဆိုချင်လို့ပါ...ညီလေး..Photo- Shop ရှာနေတာမတော့လို့ဗျာ..ဖြစ်နိုင်ရင်တင်ပေးပါဦးဗျာ.....ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ..
Photo- Shop ရှာနေတာမတော့လို့ဗျာ..ဖြစ်နိုင်ရင်တင်ပေးပါဦးဗျာ...
နာမည် လေးကြိုက်လို့ ဒေါင်းထားတာဗျို့
ကွန်ပျူတာ သုံးတဲ့သူတိုင်း စောင်ထားသင့်တယ်လို့ တော့ ထင်တာပဲ
ဟုတ်မဟုတ်တော့ဆိုတာတော့ စမ်းကြည့်ကြပေါ့ဗျာမမြင်ရတဲ့ Error တွေပါရှင်းပေးတယ်ဆိုပဲ
Error Repair Professional 4.0.7.rar (1.23 MB)	http://www.multiupload.com/A1SQ6ACYNX
ဆန်းမောင်, ပုထုဇဉ်, ဖယောင်း, sailay, tu tu, yewinnaung
Potoshop အကြောင်းေ၇းပေးပါဦး။ ကျန်တော်က Potoshop အကြောင်းစိတ်ဝင်စားလို့ပါ။
Originally Posted by Jaff Hardy
ကိုကိုသီဟ, စစ်တွေသားချေ, ရဲရဲလေး, သက်နိုင်, သန့်ဇင်ဌေး, chitnyimalay, putty
25-12-2009, 06:11 AM
XP Repair Pro + Keygen + Patch
The following full-length review applies to version 4.0
Windows and many other software installed on your PC can come across with various errors while working onaroutine basis, but generally we do not pay much attention to them and continue doing some work around. However, if you haveatool like XP Repair Pro you will never need to worry about those unwanted run-time error messages. This smart tool can allow you to becomeamaster of error-solving, at least for your own PC. XP Repair Pro hasadatabase for more than 11 thousand common problems across more than6thousand software vendors. This huge database would ensure that XP Repair Pro checks and repairs all those common errors. XP Repair Pro has different features like Registry cleanup, Disk Fragment, System Information, Registry Editor, Start up Program Manager, Harddisk Clean Up etc. XP Repair Pro also hasacontrol center which would act asaremote repair center which is also customizable according to the theme selected. XP Repair Pro is compatible with Vista along with most of other Windows operating systems.
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ Myo Min Zaw အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုကိုသီဟ, ဆန်းမောင်, မွန်သန့်, khit100, phyomyintthein
Last edited by Myo Min Zaw; 04-02-2010 at 11:19 PM..
ဆန်းမောင်, သက်နိုင်, ဇော်ရဲပိုင်, ဖြိုးယံလေး, bonge, khit100, phoetharlay, thura.it
window7 မှာ အလုပ် လုပ်လားမသိဘူး ?:25
အခက် အခဲ မရှိဘူးဆိုရင် window7 နဲ့ မကိုက်တဲ့ software တွေကိုဖော်ပြပေးလို့ရမလားမသိဘူး ??
Find More Posts by ကျော်ဇောသည်
Originally Posted by ကျော်ဇောသည်
ကျနော်တင်ထားတဲ့ Error Repair Professional 4.1.1 နဲ့ RegWinner.5.6.12.21 က XP,Vista,7အားလုံနဲ့အဆင်ပြေကြောင်းပါဗျာ..
တစ်လက်စတည်း ကြောငြာ ဝင်လိုက်ဦးမယ်..ကျနော် ခုနကအချိန်အထိ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေ( ifile ကနေ upload တင်မလို့ select files ဆိုတဲ့ ကောင်လေးကို ကလစ်ပေးတာမရ၊နောက် မြန်မာမိသားစုမှာ chat box ထဲဝင်မရ၊ ပြန်စာရေးပြန်တော့လည်း ဖိုးပြုံးချိုလေးတွေ ထည့်လို့မရ..စာလုံတွေ ကာလာပေးလို့မရ..စာပဲရေးလို့ရတယ်.ကျန်တာတွေ ဘာမှ လုပ်လို့မရဘူး) ကို မြန်မာမိသားစုဝင်တွေကို အကူညီတောင်းမလို့ပါပဲ..မတောင်းခင်..Registry Winner လေးနဲ့ scan လုပ်ပြီး Fix ပေးလိုက်တာ အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါကြောင်းဗျာ
Last edited by Myo Min Zaw; 03-01-2010 at 03:16 PM..
ဆန်းမောင်, ကျော်ဇောသည်, thura.it, thurein, tu tu
ဒီနေ့ပဲ ၄.၁.၁ ကိုတင်လိုက်ပါပြီ.............
အသုံပြုပုံလည်းမပါဘူးနော်အကိုတို့တင်ထားတာက အယ်ရာကိုဘယ်လိုဘယ်ရာကိုရှင်းပေးတာလည်းဆိုတာလေးရယ် အဲဒီ ဆောဝဲရခဲ့ယူခဲ့တဲ့ဆိုဒ်လေးတွေကိုအဆင်ပြေရင်ပြေားပေးပါလားဗျာ အဆင်ပြေနိုင်မယ်ဆိုရင် အကိုတိုဘာသာပြန်ထားတဲ့မြန်မာလိုအသုံးပြုပုံလေးကို နည်းနည်းလောက်ရေးပေးထားရင်အဆင်ပြေပါတယ်ကျေးဇူးဗျာ ဆောဝဲလေးကတော့တော်တော်ကောင်လောက်တယ်နော်ယူသွားပြီဗျ....
ကျေးဇူး အကိုရေ........ညီလေးလည်း အလုပ်တွေရှုပ်နေလို့ မ၀င်ဖြစ်တာပါ အခုလို့ တင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
အစ်ကိုရေ ဒီလင့်လေးရှိသေးရင် ပြန်တင်ပေးပါအုံးဗျာ...
Find More Posts by linlinn2007
Professional နည်းနဲ့ PDF တွေကို ပြင်မယ် သက်ပိုင် Software များဆိုင်ရာ 10 01-01-2010 11:39 AM
ANSI ISO C++ Professional Programmer's Handbook kothu E-books မျာ3း18-05-2009 03:19 PM